Nwere a oke collection fim niile na DivX / XviD format? Ma na-achọ na-ekiri ha na Apple TV ma amaghị otú e si eme ya? Na naa, ke ibuotikọ ebe a, m tumadi akọwa otú tọghata XviD / DivX ka Apple TV maka ire ụtọ playback.
DivX / XviD-aghọ ndị ọzọ na-ewu ewu ruru ya ikike mpikota onu ogologo video agba n'ime obere nha mgbe ịnọgide na-enwe dịtụ elu visual mma. Ma, ọ bụ ihe nwute na DivX / XviD faịlụ-apụghị-akwado site Apple TV. Otú i nwere iji tọghata DivX / XviD faịlụ ka Apple TV enyi na enyi usoro. Ebe a, m ike ikwu na Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Ihe kpatara ya bụ nke a na ngwa ozugbo awade ọrụ kachasị tupu maka Apple TV. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị maghị ihe format bụ ihe kasị mma maka Apple TV, ị nwekwara ike ime ya nke ọma na nke a DivX / XviD ka Apple TV Ntụgharị. Nzọụkwụ ndị dị nnọọ atọ mfe clicks. Mgbe ahụ, ị na-free ka enwe gị media faịlụ na jụụ, nnukwu Apple TV ihuenyo.
1 Ibu Ibu DivX / XviD faịlụ ka a DivX / XviD ka Apple TV Ntụgharị
Free download a ngwa, wụnye na ẹkedori ya. Mgbe ahụ, na kọmputa gị, na-emeghe nchekwa ebe gị DivX / XviD faịlụ na-echekwara, na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ gị chọrọ faịlụ si nchekwa a usoro. Ma ọ bụ na-aga "tọghata" tab> "Tinye Files" menu ịnyagharịa na nchekwa na mbubata DivX / XviD faịlụ na ị chọrọ.
2 Họrọ otu kachasị usoro maka Apple TV
Iji họrọ kachasị format dị ka mmepụta format, ị dị nnọọ pịa "Format" na akara ngosi na n'akụkụ aka nri, na popping window, ahọrọ "Apple TV" nhọrọ si "Ngwaọrụ"> "Apple" udi. Ma na-kpam kpam dakọtara na Apple TV.
Ọ bụrụ na mkpa, ị nwekwara ike ịgbanwe ụfọdụ video mmetụta dị ka ìhè, dị iche, saturation na ndị ọzọ, nke mere na ọ nwere ike igwu kacha mma na Apple TV. Lee ihe edezi Atụmatụ si ebe a.
3 Covnert DivX / XviD ka Apple TV
Ihe dị gị mkpa ime bụ nnọọ pịa "tọghata" button na ala-nri akuku nke a Video Ntụgharị. Ọ na-mere. Nke a ngwa nwere ike na-akpaghị aka-eme ndị ọzọ ihe unu. Ị nwere ike a kọfị n'èzí ma ọ bụ mee ndị ọzọ ọrụ dị nnọọ site na ime ka ọ na-agba ọsọ na ndabere. Mgbe akakabarede, i kwesịrị pịa pụtara "Open nchekwa" ịhụ mmepụta faịlụ na mgbe mbubata gị iTunes maka inwekwu mmekọrịta ka Apple TV. Ọ gwụla.
Best ihuenyo ndekọ
Olee otú iji tọghata WLMP faịlụ ka MOV
Olee otú m tọghata An AVI ka MPEG4?
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata XviD / DivX ka Apple TV